May 5, 2021 - Channel Lover
မနက်ဖန် ၉ နာရီကနေ ၁၂ နာရီထိ ယာယီမီးဖြတ်မည့် မြို့နယ်များ
May 5, 2021 by Channel Lover
မနက်ဖန် ၉ နာရီကနေ ၁၂ နာရီထိ ယာယီမီးဖြတ်မည့် မြို့နယ်များ ရန်ကုန်မြို့နယ် တစ်ချိူ့ မနက်ဖြန် ယာယီမီးဖြတ်တောက်မည်၊ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၊ခရိုင်/မြို့နယ်များအတွင်း လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် မလွတ်ကင်းသောသစ်ပင်သစ်ကိုင်းများရှင်းလင်းခြင်း ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံများထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိရာ (၆.၅.၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် (09:00)နာရီမှ (12:00)နာရီ အချိန့်အတွင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့် သာကေတ၊ဒေါပုံ၊လှိုင်၊မြောင်းတကာမြို့နယ်များအတွင်းရှိ နေရာအချို့တွင် ယာယီဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်။ credit unicode မနကျဖနျ ၉ နာရီကနေ ၁၂ နာရီထိ ယာယီမီးဖွတျမညျ့ မွို့နယျမြား ရနျကုနျမွို့နယျ တဈခြိူ့ မနကျဖွနျ ယာယီမီးဖွတျတောကျမညျ၊ ရနျကုနျလြှပျစဈဓာတျအားပေးရေးကျောပိုရေးရှငျး ၊ခရိုငျ/မွို့နယျမြားအတှငျး လြှပျစဈဓာတျအားလိုငျးနှငျ့ မလှတျကငျးသောသဈပငျသဈကိုငျးမြားရှငျးလငျးခွငျး ဓာတျအားလိုငျးနှငျ့ဓာတျအားခှဲရုံမြားထိနျးသိမျးပွုပွငျခွငျးတို့ကို ဆောငျရှကျလြှကျရှိရာ (၆.၅.၂၀၂၁)ရကျနတှေ့ငျ (09:00)နာရီမှ (12:00)နာရီ အခြိနျ့အတှငျး လုပျငနျးဆောငျရှကျမညျဖွဈပါသဖွငျ့ သာကတေ၊ဒေါပုံ၊လှိုငျ၊မွောငျးတကာမွို့နယျမြားအတှငျးရှိ နရောအခြို့တှငျ ယာယီဓာတျအားပွတျတောကျမညျ။ credit
May 5, 2021 May 5, 2021 by Channel Lover
မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့မဈေးကြီး မီးလောင်နေ ဧရာဝတီတိုင်း မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ အမှတ် ၅ရပ်ကွက် မဟာဗန္ဓုလလမ်းရှိ မြို့မဈေးကြီးမှာ ဒီနေ့ ည ၇နာရီအချိန်ကတည်းက မီးစတင်လောင်ကျွမ်းနေပြီး လက်ရှိအချိန်ထိ မီးလောင်ကျွမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘေးရန်ကင်းကြပါစေ…။ တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့ ပြည်သူများလဲ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ…။ မဆိုင်တဲ့ ပြည်သူများလဲ ဘေးရန်ကင်းကြပါစေ…။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး အေးချမ်းနိုင်ပါစေ…။ unicode မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့မစြေးကွီး မီးလောငျနေ ဧရာဝတီတိုငျး မျောလမွိုငျကြှနျးမွို့ အမှတျ ၅ရပျကှကျ မဟာဗန်ဓုလလမျးရှိ မွို့မစြေးကွီးမှာ ဒီနေ့ ည ရနာရီအခြိနျကတညျးက မီးစတငျလောငျကြှမျးနပွေီး လကျရှိအခြိနျထိ မီးလောငျကြှမျးနဆေဲဖွဈပါတယျ။ အားလုံးဘေးရနျကငျးကွပါစေ…။ တျောလှနျရေးလုပျနတေဲ့ ပွညျသူမြားလဲ ဘေးရနျကငျးကွပါစေ…။ မဆိုငျတဲ့ ပွညျသူမြားလဲ ဘေးရနျကငျးကွပါစေ…။ မွနျမာပွညျကွီး အမွနျဆုံး အေးခမျြးနိုငျပါစေ…။
ခတျေအဆကျဆကျ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တဲ့တပျမတျောကွီး ပွိုကှဲပကျြစီးအောငျ မပွုလုပျသငျ့ကွောငျးပွောပွလာတဲ့ မငျးအုပျစိုး
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ မငျးအုပျစိုးကတော့ ထောငျကနြတော အတျောလေး ကွာခဲ့ပါပွီနျော။ အခြိနျအတျောကွာ တရားရငျဆိုငျရပွီးနောကျ သဒေဏျဆိုပွီး အမိနျ့ခမြှတျခံခဲ့ရတာပါနျော။ ထောငျကပြွီးနောကျပိုငျး သူနဲ့ပတျသကျတဲ့ သတငျးမှနျသမြှ ဘာမှမကွားရတာ အတျောကွာခဲ့ပါပွီနျော။ ဒါ‌ပေမယျ့မကွာသေးခငျပဲ သရုပျဆောငျ မငျးအုပိစိုးဟာပွနျလညျလှတျမွောကျလာတာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတခြို့ကတော့ သရုပျဆောငျ မငျးအုပျစိုး ပွနျလညျလှတျမွောကျလာတဲ့အပျေါ အမြိုးမြိုးဝဖေနျသံတှထှေကျလာခဲ့ကွပွီး ဒေါသထှကျခဲ့ကွပါသေးတယျ။ မငျးအုပျစိုးကတော့လတျတလောအခွနေတှေနေဲ့ပတျသတျပွီးခတျေအဆကျဆကျ ကာကှယျစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တဲ့မွနျမာ့တပျမတျောကွီး ပွိုကှဲပကျြစီးအောငျ မပွုလုပျသငျ့ကွောငျးသူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနေ ရေးသားပွောပွလာပါတယျ..။ မွနျမာပွညျမွပေုံအကွောငျး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုထောကျခံခငျြပါသလားထောကျခံလို့ရပါတယျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုခဈြခငျခငျြပါသလားခဈြခငျလို့ရပါတယျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကိုခဈြမွတျနိုးကိုးကှယျခငျြလှနျးတဲ့စိတျကွောငျ့အမလေို့ချေါခငျြပါသလား လှတျလှတျလပျလပျအားရပါးရကွီးအမလေို့ချေါလို့ရပါတယျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကို ထောကျခံခငျြပါသလားထောကျခံလို့ရပါတယျ ခဈြခငျခငျြပါသလားခဈြခငျလို့ရပါတယျ ခဈြမွတျနိုးလှနျးတဲ့စိတျကွောငျ့အဘလို့ချေါခငျြပါသလား လှတျလပျစှာ ချေါလို့ရပါတယျ တပျမတျောအတှငျးမှာဝငျရောကျအမှုထမျးနကွေတဲ့တပျမတျောသားတှကေိုမုနျးခငျြပါသလားမုနျးလို့ရပါတယျ ဆဲခငျြပါသလားအိမျထဲမှာနပွေီးပါးစပျကနအေားပါးတရဆဲလို့ရပါတယျ ကုနျကုနျ ပွောရရငျဗိုလျခြုပျမှူးကွီးမငျးအောငျလှိုငျကိုမုနျးခငျြပါသလားမုနျးလို့ရပါတယျ ပိုးဆိုးပကျစကျ ဆဲခငျြပါသလားကိုယျ့အိမျထဲကနေ ကိုယျ့ပါးစပျနဲ့လှတျလှတျလပျလပျစိတျပါလကျပါအားရပါးရဆဲလို့ရပါတယျ ဒါပမေယျ့ဆဲတဲ့လူတှကေ ဗဒ်ဓဘာသာကို ကိုးကှယျတဲ့မွနျမာလူမြိုးတှေ ဖွဈမယျဆိုရငျ ဝစီကံကွောငျ့ ရလာတဲ့ဒဏျကိုအဲ့ဒီလူတှကေအနညျးအကငျြးခံရယုံကလှဲပီးအခွားလူတှအေတှကျတိုငျးပွညျအတှကျကွီးကွီးမားမားဆုံရှုံးထိခိုကျမှု မရှိနိုငျပါဘူး လကျရှိအခွအေနမှော ဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေကွေောငျ့တပျမတျောအပျေါမုနျးခငျြပါသလား … Read more
တရုတ်ပိုက်လိုင်းစောင့်ပေးနေတဲ့ရဲအဖွဲ့အာရုဏ်ဦးဓါးဆွမ်းဘုန်းပေးပြီး(၃)ဦးသေဆုံး မေလ ၊ ၅ ရက် မန္တလေး ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်အနီးက တောမရွာမှာ တရုတ်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းကို လုံခြုံရေးယူပေးနေရတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို ဒီကနေ့ မနက် ၅ နာရီလောက်က အမည်မသိလူတစ်စုက ဓားတွေနဲ့ဝင်ခုတ်ကြတဲ့အတွက် ၃ ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ အတည်ပြုထားတဲ့ဒေသခံသတင်းအရင်းအမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ကိစ္စ ကြောင့် အနီးအနားက တောမရွာထဲကို စစ်ကားအလုံးအရင်းနဲ့ ဝင်ရောက်စီးနင်းရှာဖွေနေပြီး နေ့လည် ၁၁ နာရီလောက်အထိ ရွာထဲမှာသေနတ်ပစ်ဖောက်အော်ဟစ်ခဲ့ကြ တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ ဒါအပြင်ရွာထဲကကျူရှင်ဆရာတဦးရဲ့အိမ်ကိုလဲဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးပစ္စည်းအချို့ယူဆောင်သွားတယ်လို့လဲဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ #MyammarLabourNews unicode တရုတျပိုကျလိုငျးစောငျ့ပေးနတေဲ့ရဲအဖှဲ့အာရုဏျဦးဓါးဆှမျးဘုနျးပေးပွီး(၃)ဦးသဆေုံး မလေ ၊ ၅ ရကျ မန်တလေး ကြောကျဆညျတက်ကသိုလျအနီးက တောမရှာမှာ တရုတျဓာတျငှပေို့ကျလိုငျးကို လုံခွုံရေးယူပေးနရေတဲ့ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျတှကေို ဒီကနေ့ မနကျ ၅ နာရီလောကျက အမညျမသိလူတဈစုက ဓားတှနေဲ့ဝငျခုတျကွတဲ့အတှကျ ၃ ဦး ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးသှားတယျလို့ … Read more
ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် နန်းမား အထက ကျောင်းမိုးကြိုးပစ်ခံရ
ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် နန်းမား အထက ကျောင်းမိုးကြိုးပစ်ခံရ May5– Kachinwaves ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် မိုးညှင်းမြို့နယ် နန်းမား အထကကျောင်း မိုးကြိုးပစ်ခံရပြီး လေပြင်းမုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးသွားသည့်ကျောင်းဆောင်ကို ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ပြုပြင်ကာ ကျောင်းဖွင့်ရန် ပြင်ဆင်နေကြာင်း သတင်းရရှိသည်။ ​ ဒေသခံပြည်သူများကလည်း ကျောင်းမဖွင့်ရန် ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြသည်။ namma unicode ကြောငျးဖှငျ့ရနျ ပွငျဆငျနသေညျ့ နနျးမား အထက ကြောငျးမိုးကွိုးပဈခံရ May5– Kachinwaves ကြောငျးဖှငျ့ရနျ ပွငျဆငျနသေညျ့ မိုးညှငျးမွို့နယျ နနျးမား အထကကြောငျး မိုးကွိုးပဈခံရပွီး လပွေငျးမုနျတိုငျးကွောငျ့ ပကျြစီးသှားသည့် ကျောင်းဆောင်ကို ကြောငျးအုပျဆရာမကွီးကိုယျတိုငျ ပွနျလညျပွုပွငျကာကျောင်းဖွင့်ရနျ ပွငျဆငျနကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ ​ ဒသေခံပွညျသူမြားကလည်း ကျောင်မဖှငျ့ရနျ ဆန်ဒထုတျဖျောနကွေသညျ။ namma
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားလေး ဒုက္ခရောက်နေ
နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ မျက်လုံးတစ်ဖက်၊ လက်တစ်ဖက်ဆုံးရှုံးဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားလေး မကွေးမြို့မှာ 27.3.21တုန်းကသပိတ်စစ်ကြောင်း ဖြိုခွင်းမှုမှာ ထိခဲ့တဲ့ကိုလျှံဖြိုးအောင်ဟာ ပုဒ်မတစ်ခုမကတဲ့အမှုတွေနဲ့ ၆ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် သူဟာ လက်တစ်ဖက်ဖြတ်ပစ်ခဲ့ရတာသာမပဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ကောဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ အဓမ္မတွေကြားထဲမှာမတရားခံခဲ့ရတာကို ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရုံကလွဲဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး အခုလဲတူတူဆုတောင်းရင်း ဝန်းရံပေးကြရအောင်ပါ မကွေးမြို့ရဲ့အာဇာနည်သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ပါ သူ့ကိုတချိူ့ကအဆင်ပြေပါတယ်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးသတင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေကြပါတယ် တကယ်တော့သူ့ရဲ့အခြေနေက မျက်စိတဖတ်ဆုံးရူံးထားရပါတယ်(မခွဲစိတ်ရသေး) ညာဘက်လက်တံတောင်ဆစ်အောက်ခြေနားကဖြတ်ရတယ် ဘယ်ဘက်လက်ကျိုး ရာဘာကျဉ်သုံးချက်ထိ..လှုပ်လို့မရသေးဘူး ညာဘက်ခြေထောက်ရာဘာကျဉ်၃ချက်ထိတယ် ဘယ်ဘက်ခြေထောက်ရာဘာကျဉ်၆ချက်ထိတယ် ခြေထောက်အနာမကျက်သေး စိုးရိမ်ရသေးတယ် စိတ်ချလို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်သေးဘူး အခုဖြစ်သွားတဲ့သူကကျောင်းသားပါဗျာ ကျောင်းကိုဘယ်လိုဆက်တက်ရမလဲ စိတ်ဓာတ်အင်အားကြံခိုင်လို့တက်နိုင်တယ်ဆိုရင်တောင် ညာဘက်လက်ကစာဘယ်လိုရေးရမလဲ လမ်းဘယ်လိုလျှောက်ရမလဲ လူချင်းမသိရင်တောင်ကျောင်းသားချင်းဆိုတဲ့ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးထားပေးကြပါ မကူညီချင်ရင်အပေါက်ပိတ်ထားကြ အာမချောင်ကြပါနဲ့ ကူညီနိုင်တဲ့သူများလည်း တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပါဝင်ကူညီပေးကြပါ လက်ရှိအနေထားကိုပုံမှာပဲကြည့်ကြပါဗျာ #crd_to_owner unicode နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ မကျြလုံးတဈဖကျ၊ လကျတဈဖကျဆုံးရှုံးဆုံးခဲ့ရတဲ့ ကြောငျးသားလေး မကှေးမွို့မှာ 27.3.21တုနျးကသပိတျစဈကွောငျး ဖွိုခှငျးမှုမှာ ထိခဲ့တဲ့ကိုလြှံဖွိုးအောငျဟာ ပုဒျမတဈခုမကတဲ့အမှုတှနေဲ့ ၆ရကျနေ့ ရုံးခြိနျးတကျရမှာဖွဈပါတယျ သူဟာ လကျတဈဖကျဖွတျပဈခဲ့ရတာသာမပဲမကျြလုံးတဈဖကျကောဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါ … Read more
ဖုန်းဆင်းကဒ်များဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုနည်း Mobile Internet ပြန်ရနေပြီနော်….. #1 Mpt ကို Psiphon/pro vpn နဲ့သုံး Location ကို US ကိုထားပြီးချိတ် အချိန်နည်းနည်းပေးစောင့်ရင် ရပါတယ် အခုကိုယ်တိုင်သုံးနေတာပါ #2 Mytel နဲ့ Telenor သမားတွေအတွက် US Location ထား မရပါက….. VPN Psiphon/pro proxy setting ထဲမှာ 203.81.75.37 ထည့် server က singapore port 8080 Address 203.81.75.37 🙂🙂🙂 #3 Ooredoo သမားတွေ Potato VPN နဲ့ ရပိနော် US Location ထား 🙋‍♂️ Quick Vpnနဲ့လဲရတယ် … Read more
အူဝဲတို့လင်မယား ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်(ကျန်တဲ့ ၁၁ ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲ?)
အူဝဲတို့လင်မယား ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်(ကျန်တဲ့ ၁၁ ယောက်ကဘယ်သူတွေလဲ?) အူဝဲတို့လင်မယားနဲ့ပတ်သက်ပြီး နစက ထုတ်ပြန်တာက ဧပြီ ၉ ရက်နေ့ နေ့လည် ၃နာရီခွဲမှာ ဗဟန်းမြို့နယ်နေအိမ်ကနေ ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ကြေညာတာနေ တမဟ ၅ ဖာပွန်ကနေပြန်ဆင်းလာပြီး ညှိနှိုင်းအဖမ်းခံတယ်ဘာညာနဲ့ လိုင်းပေါ်ဖွကြတယ်။ ဖြစ်စဉ်က ဒီလိုပါ အူဝဲတို့လင်မယားက ဘယ်မှမပြေးခဲ့ပါဘူး။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကုက္ကိုင်းရေကူးကန်လမ်းကအမှတ် 32C မှာပဲ သူတို့ရှိပါတယ်။ ဝရမ်းထုတ်ပြီးတော့နစက ဝင်ရှာတဲ့အချိန်မှာတော့မတွေ့ပါဘူး။ ဘာလို့မတွေ့လဲဆိုတော့ အဲ့ဒီအိမ်တွေဟာ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ အင်္ဂလိပ်လက်ထက်အဆောက်အဦးတွေကို ပြန်ပြင်ဆောက်ထားကြတဲ့အတွက် မြေအောက်ခန်းလို့ခေါ်တဲ့ (ဝိုင်သိုလှောင်ခန်းတွေ)ပါပါတယ်။ လာရှာစဉ်မှာ အဲ့အခန်းတွေထဲမှာပဲ ပုန်းခိုနေတာလို့ယူဆရပါတယ်။ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာက ဧပြီ ၉ ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းမဟုတ်ဘဲ နံနက် ၁၂နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ကား ၇ စီးသုံးသွားပါတယ်။ ကုက္ကိုင်းရေကူးကန်လမ်းက မင်းလမ်းနဲ့တဆက်တည်းဆိုတော့ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ … Read more
အခုလိုအချိန်မှာ အင်တာနက်ကို ကိုယ့်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံအောင် ဘယ်လိုသုံးကြမလဲ (How to use internet safely NOW) ခုချိန်လုပ်သင့်တာတွေ.. မလုပ်တတ်ရင် Youtube မှာ How to ဆိုပြီး ရှာကြည့်ပါ။ အကုန်ရှိပါတယ်။ ၁။ အင်တာနက် စဖွင့်ကတည်းက VPN သုံးပါ။ VPN ကို ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့။ Free ထက် Paid ကို ပိုအားပေးပါတယ်။ ဘယ်လောက်မှ မပေးရပါဘူး။ Nord တို့၊ Tor တို့ သုံးပါ။ ၂။ ဖုန်းရဲ့ Browsing Data Clear လုပ်ပါ။ Browsing ကို Private Mode နဲ့သုံးပါ။ ၃။ ဖုန်း Location ကို … Read more
ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ အလိမ်မခံရစေဖို့ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါ…။
ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေ အလိမ်မခံရစေဖို့ ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါ…။ ယခု ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေပေးကမ်းလှူနေတာနဲ့ အညီ ပေါလာတာတွေက လူလိမ်တွေပဲ။ သူတို့က ဘယ်လိုလိမ်လည်းဆိုတော့ လိုင်းပေါ်က သနားစရာပုံမှန်သမျှ save ပြီး ထမင်းမစားရတာ ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။ အမေကလည်းနေမကောင်းလို့ပါ။ ဘာညာနဲ့CDM သမားလိုလိုပြေးနေရတဲ့ defense team လိုလိုFoodpanda rider လိုလို ဘာလိုလိုတွေ လုပ်တာ။ လှူတာလည်းလှူကြပါ။ ဒါပေမယ့်သေချာ စီစစ်ပြီး လှူ။ CDM သမားအကူအညီတောင်းတယ် ကိုယ်လည်း အပြင်မှာသူ့ကိုမသိဘူးဆိုရင် – ဝန်ထမ်းကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်တောင်း ဝိုင်းကြီးချုပ်ကလူတွေဆီ သွားစစ်ကြည့်မှန်မမှန် ။ Foodpanda rider ဘာညာဆိုရင်လည်း acc တွေဝင်ကြည့် active မဖြစ်တဲ့ acc တွေဆို မကူနဲ့။ ပြည်ပရောက်တော်တော်များများအဲ့လိုတွေ နေ့စဉ်ကြုံနေရပြီး ပါသွားပြီးမှ … Read more